प्रयोगको लागि निर्देशन। "निक-अतिरिक्त एम": उत्पादन विशेषताहरु र प्रयोगको लागि सिफारिसहरू
यस लेखमा दिइएको छ जो दबाइ "Nika-अतिरिक्त एम प्रो" निर्देशन पुस्तिका, एक प्रभावकारी उपकरण छ, रोगाणुरोधी प्रभाव छ। यो भाइरस र जीवाणु (tubercle bacillus सहित) को एक किसिम सामना गर्न सजिलो छ।
जहाँ लागू गर्न?
यो एक उत्कृष्ट जीवाणुरोधी प्रभाव छ किनभने यो उपकरण, धेरै प्रतिष्ठानबाट मा मांग मा धेरै छ। प्रायजसो, "निक अतिरिक्त-एम" समाधान प्रयोग गरिएको थियो:
- अस्पताल र रोगनिरोधी संस्थाहरु;
- विद्यालय र Kindergartens मा;
- canteens र अन्य खाने ठाउँ;
- उपयोगिता सुविधाहरु मा।
प्रयोगको लागि निर्देशन: "निक अतिरिक्त-एम"
यो काम समाधान तयार गर्न सजिलो छ। यो उद्देश्य को लागि, यो एक गिलास, तामचीनी वा प्लास्टिक कन्टेनर प्रयोग गर्न मनमोहक छ। यो उपकरण हुँदा पानी संग पतला गर्न। को disinfecting उद्देश्यका आधारमा उचित एकाग्रता तयार गर्न आवश्यक छ। को अपनाए हालतमा दर सांद्र कुल मात्रा को 0.3-20% छ।
प्रयोगकर्ता आवेदन, "निक अतिरिक्त-एम" को रूपमा - अर्थ यो धेरै तरिकामा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। कोठा मा फर्श, पर्खाल र फर्नीचर हटाउन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। साथै, यो उत्पादन लुगा soaking र बर्तन र चिकित्सा उपकरण immersing लागि प्रभावकारी माध्यम रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कसरी ध्यान सक्छ प्रयोगको लागि निर्देशन वर्णन गर्छ? "निक-अतिरिक्त एम" - भाइरस र जीवाणुहरु जलाएर एक प्रभावकारी माध्यम हो। यसलाई निम्न विशेषताहरु छ:
- सार्स र इन्फ्लूएंजा, साथै ब्याकटेरिया, Fungi र dermatophytes को एक किसिम सामना गर्न को रोगजनकों को सबै प्रकार नष्ट;
- सक्रिय क्लोरीन गठन घटक समावेश गर्दैन;
- यसरी यो एक सुखद गंध छ, छाला लागि एलर्जी प्रतिक्रिया, साथै सुरक्षित कारण छैन;
- यो काम सतह बिगार्न गर्दैन;
- चिकित्सा उपकरण लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस तयार समाधान को प्रयोगको लागि सिफारिसहरू
के अन्य सल्लाह प्रयोगको लागि निर्देशन समावेश? "निक अतिरिक्त-एम" जब राम्ररी प्रयोग मात्र राम्रो प्रभाव प्रदान गर्नेछ।
फोहोर भाँडा र चिकित्सा उपकरण, र अधोवस्त्र को तयार समाधान जोडतोडले र त्यसपछि पानी प्रचुर मात्रा साथ धोए। सतह र कठोर फर्नीचर हटाउन कपडा तरल मा डूबा। यस मामला मा, प्रक्रिया दुई पटक पटक हुनुपर्छ। व्यक्तिगत वस्तुहरू Disinfecting आफ्नो सिट अगाडि बिरामी हुन सक्छ।
धेरै अध्ययन यो उपकरण को प्रभावकारिता सिद्ध छ, त्यसैले तपाईं निर्धक्क प्रयोग र सबै जीवाणु नष्ट छन् थाहा गर्न सक्नुहुन्छ।
शिशुहरू मा colic सुविधा जो दबाइ, "Plantex" - प्रयोगको लागि निर्देशन
दवादारू 'Simvastol'। प्रयोगको लागि निर्देशन
"अमोक्सिकोभल": प्रयोगको लागि निर्देशन
औषधि "Proktozan" (मलम, suppository)। निर्देशन
दबाइ "Bicalutamide": प्रयोग, वर्णन, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
फूल बेड लागि फूल
सोभियत विज्ञान कथा। माध्यमबाट - दर्शकलाई
अतिशयोक्ति के हो र कसरी व्यवहार गर्ने?
स्वतः शो "क्रोकस स्वतः": ग्राहक समीक्षा
स्कर्ट-छोटकरीमा: सबै भन्दा राम्रो couturiers को नमूना
क्रेनबेरीहरू, चीनीको साथ पखाल्ने: ताजा मिठाईको लागि एक नुस्खा
नाबालिग को अधिकार
"मेगाफन" को लागि क्रेडिट कसरी लिने?
के सामान्य जन्म वजन?
छनौट र सबै भन्दा राम्रो समीक्षा लागि सुझाव: पीडीएफ-फाइलहरू पढ्न को लागि कार्यक्रम
दुनिया मा rarest फूल - विवरण र फोटो (शीर्ष 15)